WARBIXIN: Xiddiga Leicester City ee Abaalmarinta PFA, ku guuleystay Riyad Mahrez oo ka fishay waxa ay ku timid guusha Dawacooyinka – Miyaadse Ogtahay waxa lagu qaaday dhamaan ciyaartooyda kooxda kadib kulankii ay garaaceen Swansea? | Haqabtire News
WARBIXIN: Xiddiga Leicester City ee Abaalmarinta PFA, ku guuleystay Riyad Mahrez oo ka fishay waxa ay ku timid guusha Dawacooyinka – Miyaadse Ogtahay waxa lagu qaaday dhamaan ciyaartooyda kooxda kadib kulankii ay garaaceen Swansea?
April 25, 2016 - Written by admin
Leicester City xidigeeda ku guuleystay PFA Player of the Year, Riyad Mahrez, ayaa sheegay in wax qarsoodi ah aysan aheyn in qaab la yaab leh ay kooxdiisu isku duubni ay ugu qadayaan Horyaalka.
Dawacooyinku waxaa waxa ay hadda joogaan kaalinta ugu sareysa Horyaalkaa, waxaana ay xaqiijiyeen in ay ciyarayaaan xilli ciyaareedka soo socdain ay ciyaarayaan Champions League.
Ka hor inta xiddigan Algerian aan lasiin abaalmarinta shakhsiah, waxa uu dhaliyay goolkii furitaanka kulankii 4-0 ay kaga badiyeen kooxda Swansea.
Milkiilayaasha Thai ayaa helicopters gaar ah dhammaan ciyaartoyda kooxda koowaad kusoo qaaday si ay kaga qeyb galaan xafladan abaalmarinta lagu bixinayay.
Weeraryahan Leonardo Ulloa, kaasoo dhaliyay gool cajiib ah markii bedalay ninka ganaaxan ee Jamie Vardy ayaa, horaantii xilli ciyaareedkaan sheegay inusan qabin fikirka ah in horumarkaan garayaan, iyadoo kabtan Wes Morgan uu isna sheegay in welwel badan badan kadib wax walba soo dhamanayaan.
Haddaba Mahrez ayaa ku celiyay dareenka ah in si wada jir ah ay ku timid guusha kooxda,saxiibada garbihiisa taaahnaa Mahrez xalay waxa kamid ahaa, Danny Simpson, Jamie Vardy iyo Wes Morgan,